ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုင်ငံရေးသမားများလည်း လိုလား | ဧရာဝတီ
ကျော်ခ| November 7, 2012 | Hits:1,927
1 | | KIO နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ကျင်းချန်း ဟိုတယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာ စစ်ပွဲများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသော ကချင်ပြည်နယ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိလိုကြောင်း ယင်းဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံ ရေးသမား များက ပြောဆိုကြသည်။
အစိုးရတပ်များက ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA)အပေါ် ခုခံရုံမှအပ ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း မရှိကြောင်း ပြော သည်။
သို့သော် ဒေသခံများအနေဖြင့် စစ်မြေပြင်ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခံစားနေရကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီ(NDF) ပါတီ ၏ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဘောက်ဂျာ က ပြောပြသည်။
“စစ်တပ်ဘက်က ထိုးစစ်တွေက တကယ်ရှိနေတာ၊ ဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်နေကြတယ် ဆိုတာ၊ ဒေသခံတွေ အသိ ဆုံးပဲ၊ အခု ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စမှာလည်း အစိုးရဘက်က တကယ်ရိုးသားတယ်၊ မှန်ကန်တယ် စေတနာထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ် လာနိုင်စရာ ရှိပါတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အချိန်ဆွဲနေစရာမလိုဘူး၊ စောင့်နေစရာမလိုဘူး၊ အဓိက ကတော့ သမ္မတ အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်မှာ စေတနာထားဖို့၊ ရိုးသားဖို့ လိုအပ်တယ်၊ အဲဒါဆိုရင် ဒီပြဿနာက ၅ မိနစ်အတွင်းတောင် ပြေလည် သွားနိုင်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်ဘောက်ဂျာ က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့(KIO) နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ရွှေလီမြို့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ သို့သော် စစ်ရေးအရ ဆွေးနွေးရန် နှစ်ဘက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များ တက် ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိ၍ သဘောတူညီချက် တစုံတရာ မရရှိဘဲ ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လုပ်သွားရန်သာ ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် တိုက်ပွဲများလည်း ဆက်လက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
အစည်းအဝေးတွင် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းထွန်းနောင် က တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အဆုံးအဖြတ် ပေး ဆွေးနွေးနိုင်မည့် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွန်မော် တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အထူးစစ်ဆင်ရေး မှူး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးနိုင်မည့် အခွင့်အရေး လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက် စိတ် မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ ၎င်း အနေဖြင့် တိုက်ပွဲများ လျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အလေးထားသူဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြောင်း ယနေ့ချိန်အထိ ၎င်းတို့ဘက်မှ ခုခံယုံမှလွဲ၍ တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းထွန်းနောင် က အစည်းအဝေးတွင် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
KIA အပေါ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဟု ယင်းသို့ပြောဆိုမှုအပေါ် ဒေသတွင်းနေထိုင်သော ဒေါ်ဘောက်ဂျာ၊ KIO ခေါင်းဆောင် ဟောင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေး ပါတီ(KSPP) ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ တူးဂျာ နှင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောတို့က မဟုတ်မှန်ကြောင်း တုံ့ပြန်လိုက်ပြီး အစိုးရဘက်မှ ထိုးစစ်များပြုလုပ်နေ ခြင်းကို ဒေသခံများလည်း တွေ့မြင်နေကြကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို ကြသည်။
ဒေါက်တာ တူးဂျာ က ဆက်လက်ပြီး အစိုးရနှင့် KIO တို့ နှစ်ဘက်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားနေသည်ဟု မြင်ကြောင်း၊ ယခု တစ်ကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲကို အစ ယူပြီး စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မည့် လမ်းများ ရှာဖွေလုပ်ဆောင်စေလိုကြောင်း ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတော့ နှစ်ဘက်စလုံး လိုချင်ကြတာပဲ၊ ဒါကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရရှိရာ ရရှိကြောင်း နည်းလမ်းတွေ ကို တော့ ရှာကြရမှာပဲ၊ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးက ဘာလဲ၊ ဘာတွေကိုဖြေရှင်းလို့ရှိရင် ရနိုင်တယ်ဆိုတာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးက အဓိက ဖြစ် တယ် ဆိုတာ၊ သမ္မတ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောနေပြီ၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကလည်း ပြောနေပြီး ဒါပေမယ့် အတုအယောင် ငြိမ်း ချမ်း ရေး ဆိုရင်တော့ အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး”ဟု ဒေါက်တာ တူးဂျာ က ဆိုသည်။
KIO နှင့် အစိုးရအဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံရာ၌ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒု ဥက္ကဌ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း က နောက်တကြိမ်တွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြမည်ဟု ပြောခဲ့သော်လည်း ဖြစ်မြောက်ရန် ခက်ခဲသော အနေအထား သို့ ရောက်ရှိသွားကြောင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“စစ်တပ်ကနေ တပ်တွေဆုတ်ပေးဖို့ နဂိုက သူတို့ (KIO) က တောင်းတယ်၊ တောင်းလို့ ဦးအောင်မင်းက အပင်ပန်းခံပြီး တပ်တွေ ဆုတ်ပေးဖို့ ခေါ်လာတယ်၊ ခေါ်လာတော့လည်း ဘာပြောလဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ကြီး ပြောနေတော့ ဦးအောင်မင်း က လည်း တော်တော့ကို စိတ်ဓာတ်ကျသွားပုံရတယ်၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း ဖြစ်မြောက်ဖို့က ရင်လေးစရာ ဖြစ်နေပြီ”ဟု သူက ပြောဆိုသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အစိုးရက အပစ်ရပ်ရေးကို အဓိကထားဆွေးနွေးလိုသော်လည်း KIO က နိုင်ငံရေးအရ အသေအချာဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် အစိုးရဘက်မှ ခေါ်ဆောင်လာမည့် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုလည်း ကြိုတင် အကြောင်းကြားထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် လွဲချော်မှုတချို့ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူ ဦးအောင်ကျော်ဇော ကပြောသည်။
“အခုဖြစ်တဲ့ ပြဿနာမှာ ဦးအောင်မင်းတို့က ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာကြိုမပြောထားဘူး၊ ကိုမြင့်စိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာ ကြို တင်ရှင်းပြ မထားတာလည်း ပါတယ်၊ နောက်တခုက ဦးအောင်မင်းက မီဒီယာတွေမှာပြောနေတဲ့ ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ ပတ်သက် လို့ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က နိုင်ငံရေးကိစ္စနောက်ရောက်ပြီးတော့ တပ်ပဲ အဓိကထား ပြောတာကိုး၊ ဒါကြောင့်မို့ သူလည်းတပ်ကို ခေါ်လာ တာ”ဟု ဦးအောင်ကျော်ဇော က ပြောဆိုသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်း ထွန်းနောင် အပါအဝင် ဒေသတွင်းရှိ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်လာသည်ကို တိုးတက်မှု တရပ်အဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်း ဦးအောင်ကျော်ဇော က ဆက်ပြောသည်။
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက နိုဝင်ဘာလ ထဲတွင် နှစ်ဘက်ပြန်ဆုံကြပြီး နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးချင်ကြောင်း ပြောဆိုသော်လည်း KIO က မူ ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက် ထားသော ဆွေးနွေးပွဲမျိုး မဖြစ်လိုကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွန်မော် က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဘယ်လို ပုံစံ ဆွေးနွေးကြမလဲ ဆိုတာကို သဘောတူကြရင် အချိန်မရွေး တွေ့လို့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘက်ကနေ ပြောထား တာ ကတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အောက်ကို ၀င်ပါ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပါလို့ ကြိုတင် ကန့်သတ်ချက်နဲ့ လုပ်ထားရင် ရှေ့ကို ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးရတာ အခက်အခဲ ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီလို ကြိုတင် ကန့်သတ်ချက်တွေ မထားဘဲနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးကြမယ်၊ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါကျမှ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးမလဲ၊ ဒါကို အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ညှိနှိုင်းချင်တယ်”ဟု သူက ပြောပြသည်။
ယမန်နေ့ထုတ် အစိုးရ စစ်တပ်အာဘော် မြဝတီသတင်းစာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသား ထားသော “အမှန် တရား ဘက်တွင် တပ်မတော် ရှိပါသည်” ဆိုသည့် ဆောင်းပါးတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် အငြင်းပွားဖွယ် တစုံတရာ ရင်ဆိုင်လာရ ပါ က နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဘက်မှ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည် သွားမည်ဆိုသည်ကို အခိုင်အမာ ပြောကြား လိုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment pps12345 November 7, 2012 - 3:25 pm	တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်မဆင်တော့ပါ။ တပ်မတော်သားများ သည် တပ်မမှူး အိမ် စားဝတ်နေရေး အတွက် မှောင်ခိုလမ်းကို သာကာကွယ်နေပါသည်။ KIA စခန်းကိုလည်း လူအင်အားဖြင့် မတိုက်ပါ။ ၈၂ မမ လေကွဲသီးများဖြင့် KIA စခန်းများ ကို နေ့စဉ် အချက်ရာချီ ပစ်ခတ်နေပါသည်။ KIA စစ်သား များ နားကွဲသေစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော် တပ်ရင်းမှူးများ နှင့် ဗျူဟာမှူးများ စစ် မတိုက်လိုကြပါ။ အကယ်၍ ဒဏ်ရာရရှိပါက ရာထူးမတက် နိုင်သကဲ့သို့ အရပ်ဘက်ရွှေ့လျှင်လည်း ဌာနကောင်းများ မရနိုင်တော့၍ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျဆုံးသွားပါက သူတို့မိသားစုများ ဘဝပျက်မည်ကို စိုးရိမ်နေရပါသည်။ ဒေသခံများ၏ ထောက်ခံမှု မရသည်ကိုစစ်မြေပြင်မှ တပ်မှူးများ နားလည် သိရှိနေပါပြီ၊။သမ္မတ ကလူကောင်း လုပ်၊ ကိုမင်းအောင်လှိုင်က လူဆိုးလုပ်ပြီး အရင်လူဟောင်းများ၏ အမိန့်ဖြင့် အောက်ခြေတပ်သားများကို သေတွင်း ပို့ကာ စစ်တိုက်နေကြရသည် ကိုလည်းအောက်ခြေ အဆင့်အထိ သိရှိနေပါသည်။ တရုတ်ကိုမုန်းသော ဘိုကြီးမောင်ရွှေသားများ နိုင်ငံရေးတွင် ကလဖန်ဝင်ထိုးနေ၍ တပ်မတော်သားများ ဓားစာခံဖြစ်နေရကြောင်း တပ်မှူးများ နားလည်နေပါသည်။ ဝန်ကြီးများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်များအိမ်ရှိ အိမ်ဖော်များကို ပေးသော လစာနှင့်ညီမျှသော လစာနှင့် တောထဲတောင်ထဲတွင် နေထိုင်နေရသောကြောင့် တပ်မှူးများ စိတ်ပျက်နေကြပါသည်။ တပ်မတော် တပ်မှူးငယ်များ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသည်ကတော့ ပြောစရာမလိုပါ။ ကိုသိန်းစိန် နှင့် ကိုမင်းအောင်လှိုင်တို့ အရင်ခေါင်းဆောင် ဟောင်းတွေကို ဖမ်းချုပ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်လိုက်ကြရင်ဖြင့်……………………………နိုဘယ်ဆု ဆိုတာ……………….ဘယ်သူ အတွက်လဲ…..
Reply	ဘကြီး November 9, 2012 - 7:52 pm	ကေအိုင်အေ ဘက်က လည်းထိုး စစ်မဆင်ပါ တွေ့သမျှ စခန်း တွေ့သမျှ စစ်သားတွေကို ရတဲ့နေရာ ကနေချောင်း မြောင်းပြစ်ခတ်ကာ သူရဲကောင်း လူသတ်သမားများလုပ်နေပါတယ် ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဒီမိုကရေစီ ကိုမလိုအပ်ပဲ သမ္မတ မလုပ်ရရင် တိုင်းရင်းသား အခွန့်အရေး ဆုံးရှုံးတယ် ဆိုပြီးပြောနေပါတယ် တရုတ်ပြည်ဘက်မှလည်း သူတို့ နန်းတော်တွေနဲ့ ပြည့်လို့ ဘုရင်ရူး ရူးနေပါတယ် ။ အပေါ်က ကွန့်မန့်ကိုလည်းထောက်ခံပါတယ်။ ရယ်စရာခေါင်းဆောင်များနဲ့ စာမတတ်သော တပ်သားများပေါတဲ့ မြန်မာပြည်
Reply	ohnmar November 10, 2012 - 11:10 am	ဟုတ်ပါသည်။ မှန်ပါသည်။ ကချင်စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့်မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ
Reply	ohnmar November 10, 2012 - 11:01 am	အဲ့ဒီ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြည်သူအားလုံးလက်ခံပါဝင်ဆွဲထားတာမဟုတ်တော့
Reply	လမင်း November 12, 2012 - 12:39 pm	အချစ်တောင်ကုန်းနဲ့စစ်တောင်ကုန်းမှာမတရားတာမရရှိဘူး မှန်တယ်ထင်ရင်သိမ်းပိုက်ရမယ်။